Metro - ejansii sochii keetii - King County
አማርኛ (Amharic) عربى (Arabic) 中文 (Chinese Traditional) English 한국어 (Korean) русский (Russian) Español (Spanish) ትግርኛ (Tigrinya) Українськаse (Ukrainian) Tiếng Việt (Vietnamese)
Metro - ejansii sochii keetii
King County Metro hawaasa fayya buleessa uumuuf, diinagdeef cimsuuf and naannoo itti fufiinsa qabu uumuuf geejjiba uummataa sadarkaa addunyaatti beekamaa, mala ammayyaa ta’een qindaa’e fi argannoowwan haaradhaan dabaalame uumaa jira.
Sochiin mirga dhala namaati
Metro dhaaf sochii jechuun yeroo deemuu barbaaddetti, nagaadhaan, dhiibbaa tokko malee, itti fufiinsaan, dandeettii bakka barbaadde dhaquu jechuudha.
Kaayyoon keenya King County keessatti sochii naannoo fi jireenya bareedaa qabu fooyyessuudhaaf tajaajila geejjiba uummataa baay’ee mijataa ta’e dhiyeessudha.
King County keessa hawaasa sab daneessa fi haala teessuma garaagaraatu jira; kanaafuu neetwoorkii sochii namoota carraa garaagaraa akka argatan godhuu fi hawaasa keenya guddataa jiru walitti fiduuf garagaaru qopheessaa jirra. Garaa garummaa sanyii, bakka fi tajaajila dursi barbaachisuuf irratti hundaa’ee uumamu maqsuudhaaf kutannoo qabna.
Naannichatti neetwoorkii baasii guddaa kan qabu nuyi. Qulqullina qilleensa keenyaa fooyyessuu fi eegudhaaf faalama aara qilleensa faalu hir’isaa jirra. Metro, industirii geejjibaa fi biyyattii bara 2040 tti gara aara 100% n zeerotti galchuutti geessaa jira.
Naannolee keenya guddataa jiran keessatti fedhii tajaajilaa dabale guutudhaaf iddoowwan buufata baasii keenya amma jiran fooyyessuu fi haaraa ijaaruu irratti ni hojjanna. Bu’uuraaleen Metro keenya muuxannoowwan guddina itti fufiinsa qabuu fi ijaarsa aara irraa bilisa ta’een akkaataa wal simatuun ni ijaaramu. Akkasumas carraa hojii naannoo sanaaf ni uuma.
Neetwoorkii sochii kan hawaasaaf mijataa ta’e, diinagdee gabbisu fi naannoo itti fufiinsan misoomsu danda’u ijaaruun hundumti keenya waliin gara fuulduraatti imaluu ni dandeenya.
Tajaajila geejjiba uummataa baay’ee mijataa isiniif dhiyeessuu fi sochii naannoo fooyyessuuf kutannoo cimaa qabna.
Metro akkamitti akka gargaarame
52% Taaksii Gurgurtaa
15% Walta’iinsawwan Naannoo
8% Kan biroo
4% Liqii yeroon isaa murtaa’e
Liqii yeroon isaa murtaa’e
Akkaataa maallaqni itti bahe
73% Baasii Hojii
14% Kaappitaala- Bu’uuraalee Misoomaa
11% Kaappitaala- Doonii
2% Tajaajila Liqii
Kaappitaala- Bu’uuraalee Misoomaa
Mirga Waraabbii 2021 - King County Metro
King County Water Taxi’n Imaltoota fi daawwattoota Oddoola Vashon irraa gara magaala Seattle tti daqiiqaa 22f tajaajila geejjibaa dhaqaa galaa yookin immoo yommuu gamoowwan dhedheeroo fi miidhagina magaalattoo daawwattan, imala dhaqaa gala daqiiqaa 15 dhiha Seattle tti ni laata. Kuni immoo iddoo dhaabbii konkolaatatiif kanfaluu kaffalauu fi dhiphina tiraafikaa hambisuudhaaf akka filannoo cimaatti gargaara. Yeroo geemiiwwan galagalaa kanneen Daaktuu, Siihaawuks fi Sagalee dhageessistuu taphatamanitti, tajaajilli Metro kun sarara lixa Seattle ttis ni argama. Qabxii!
Neetwoorkii baasii saffisaa fi caalmatti idilee ta’e
Namoonni waanta barbaadaniin wal qunnamuuf geejjiba irratti maxxanu. Baasiwwan keenya ammo waggaa guutuu guyyaatti aduu fi cabbie keessa deemu. Ganamaaa fi galgala wayita imaltoonni itti heddummatanitti daqiiqaa 5-7 tti, tajaajila si’ataa fi itti fufiinsa qabu kennuuf kan gargaaru, sararoota RapidRide keenya babal’isaa jirra. Sararoonni RapidRide Metro’s jaha, torbanitti hanga deemsa 67,000 taasisa. Kana jechuun, osoo RapidRide hin bu’uureffamin dura 70% baasii sararoota naannoo tokko tajaajilan ni caala jechuudha. RapidRide torba dhufaa jiran hawaasa Auburn, Bellevue, Burien, Kent, Kirkland, Renton, Seattle, fi White Center keessa jiraatan wal qunnamsiisa.
Baabura salphaadhaan wal qunnamsiisuu
Baaburri salphaan bara 2021 tti Balbala Kaabatti akkasumas bara 2023 tti gara Bahaatti dhufaa jiraachuun wal qabsiisee, namoota daandii haaradhaan wal qunnamsiisuuf jecha Metro tajaajilaa fi daandiwwan muraasa ni jijjiira. Bara 2009 kaasee kutaan baabura Metro Imala isaa baabura salphaadhaan walqunnamsiisuuf hojjataa fi sirreessaa ture. Nutis waliigaltee tajaajila keenyaa haaressineerra. Walumaa galatti konkolaachiftoota kumaatama dhibbaan lakkaa’aman waggaa waaggaadhaan walumaan tajajilla.
United States keessatti sagantaa konkolataa hawaasaa baay’ee guddaa fi idddoo dheeraa qaqqabu dhiyeessina. Vaanpuuliwwan Meetiroo 1,600 ol yeroo imalaa murtaa’etti daandirratti argaman waliin, tajaajilli konkolataan waliinii kun baasii xiqqeessa, hawaasa walitti fida, akkasumas faalama qilleensaa ni hir’isa.
Tajaajiloota isaa hundumaaf wal qixa dhiyeessuuf Metro kutannoodhaan hojjata. Sagantaan banaa parataranist keenya maamiltoota hir’inni qaama isaanii geejjiba Metro keenya akka hin fayyadamne isaan dhorkeef, waggaatti imala miliyeena tokko ta’u dhiyeessa. Saganataan banaa keenya biyya keessatti isa baay’ee filatamaa akka ta’e mirkaneessuuf, yaada Imaltoota, waldhaansa kennitoota, qooda fudhattoota fi qindeessitoota hawaasaa irraa fudhachuun haalan itti daballa.
Waanta barbaachisaadhaan walqunnamsiisuu
Hawaasa wal qunnamsiisuun ergama Metro isa guddaadha. Tajaajila kana gara magaalota xixiqqoo fi baadiyyaa biyyaattiitti babal’isuudhaaf baay’ee itti dhama’aa jirra. Geejjiiba Sulula Snoqualmie kan tajaajila geejjiba uummataa mana manattii fi tajaajila sarara murtaa’ee kennu (qaamota nu waliin hidhata ta’an waliin) maallaqaan akka gargaaramu ni goona. Tajaajilli geejjibaa kunis kan kennamu Carnation, Duvall, Fall City, Kaaba Bend, Preston, fi Snoqualmie keessatti.
Geejjibni ummaataa nama hundumaa fayyada
Konkolaachistoonni Metro konkolaattonni baay’inaan karaa irratti akka hin argamne gochuudhaan dhiphina tiraafikaa fi qulqullina qilleensaa fooyyessuuf gargaaru. Kanaafuu, hundumti keenyaa bakka deemuu barbaanne saffisaan dhaquu dandeenya.
Biskileettiwwanii fi imalli bakka tokkotti ramadamu
Biskileetii oofuun karaa fayya qabeessa imalaan wal nama qunnamsiisudha. Biskileetii oofuu fi imaluun heddummina geejibaa hir’isuu fi naannoo keenya fooyyessuuf garagaara. Geejjibni Metro fi water taxis biskileetii raakii fi lookariiwwan kan qabu ta’ee giddu gala imalaa, iddoo dhaabbii konkolaata fi buufata baaburaa heddu keessatti argama.
Konkolaataa daandirraa karaa Seattle
Metro sararoota konkolaataadaandirraa Seattle lama, South Lake Union fi First Hill, keessatti hojjachuu isaatiin ittiin boona. Kunis konkolaachistoonni magaala keessa iddoo ddhaquu barbaadan akka dhaqaniif filannoo heddu kennaaf.
Imala gara danditti
Trailhead Direct, Metro fi Paarkiwwan King County wal ta’uun kan hogganan, daandiwwan sigigaachoo beekamaa karaa I-90 muraasaaf tajaajila geejjibaa mijataa ta’e ni kenna. Tokko tokkoon imala taasifamuu, akkauma kan baasii imala Metro kaffaltiin isaa tokkuma. Kunis nama hundumaaf carraa bakkeewwan bashannanaa uummataa akka daawwatani fi itti gammadan carraa kennuufidha. Kuni immoo bakka daandiin itti ka’utti yeroo heddummina konkolaataa hir’isanittidha.
Namootni hundumtuu akka argataniif salphisuu
Metro tajaajila geejjibaa kanneen naga qabeessa fi mijataa imala akka idooo imaltoonni miillan irra deeman, daandii qaxxaamuraa, karaa darbaa dhiyeessuuf Waajjira Gewejjiba Washington, Waajjira Geejjiba Seatle fi magaalota King County heddu waliin qindoominaan ni hojjata.
Gewejjiba gara fuulduraatiif
Metro yaadrimee geejjiba ammayyaa fayyadamuudhaan seenaa yeroo dheeraa qaba. Kunis raakii biskileetii to’attuu keenya irratti maxxansuu kaasee hanga bara 1970 keessa sagantaa vanpool keenya hojiirra oolchuu akkasumas sagantaawwan haaraa kanneen akka bara 2000 keessa konkolaataa waliinii Flexcar fa’aa baay’isuudha. Amma sagantaalee yaalitiin gara toora haaratti deemaa jirra. Kunis tajaajila fedhii irratti akkasumas appilikeeshiniiwwan geejjiba uummataatin wal si qunnamsiisan.